छोराछोरीको शरीर वयस्क नजिक ध्यान आवश्यक छ। समय समयमा pediatricians प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ जो Urinalysis, स्वास्थ्य को एक सूचक हो। यो प्रक्रियाहरु बच्चाको शरीर मा ठाउँ लिन के देखाउँछ। बच्चा को मूत्र मा Oxalate - असामान्य छैन। तिनीहरू किन देखा गर्छन्, र यो के हो?
oxalate के हो?
तिनीहरूले प्रत्येक व्यक्ति को मूत्र मा हो, तर आफ्नो नम्बर नगण्य हुनुपर्छ। क्याल्सियम Oxalate ओक्सालिकएसिड नुन विनिमय निपटने मा ठूलो परिमाणमा देखिन्छन्। आफ्नो कारण वंशानुगत कारक देखि लिएर र आहार मा त्रुटि संग समाप्त, धेरै छन्। यो यसैले मूत्र मा कति पत्ता oxalate को महत्त्वपूर्ण अवलोकन छ। Norma, यी पृथक अवस्थामा छन् भने। तर फेरि तिनीहरूको उपस्थिति देखाउन retested भने, यो आवश्यक रूपमा यो अन्तस्करणले काम उल्लङ्घनको संकेत हुन सक्छ, यो तथ्य ध्यान छ। विशेषज्ञहरु oxalates कारण हर्मोन असंतुलन, तनाव अवधिमा गर्न उठ्नेछ सक्छ फेला छोराछोरीलाई उमेर र किशोरावस्था को 6-7 वर्ष मा मूत्र।
रोग को लक्षण के के हुन्
पहिलो, बच्चाको मूत्र संतृप्त पाइहाल्छन् रंग। कहिलेकाहीं रगत यो पत्ता लागेन गर्न सकिन्छ। दोस्रो, कम दैनिक मूत्र को दर। तेस्रो, मा पृष्ठभूमिमा लवण worsen वा biliary पर्चा रोग देखा पर्न सक्छ। चौथो, लगभग सबै अवस्थामा पत्ता र dystonia। तथापि, छोराछोरीलाई मा पाँच वर्ष छैन लक्षण उच्चारण हुन सक्छ। वृद्ध बच्चा, oxaluria लक्षण urolithiasis मा जस्तै बारेमा हुन सक्छ कि अधिक संभावना। यी पेट दुखाइ, थकान को उद्भव समावेश गर्नुहोस्।
एक सख्त आहार गर्ने अधिकार पिउने शासन, जीवन शैली चिकित्सा को normalization, अनुपालन: को मूत्र मा बच्चा oxalate चार मुख्य सिद्धान्तमा आधारित छ जो उपचार, एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ।
oxalates मा भोजन
यो यस्तो रोटी (राई कुनै बोक्रा), सूर्यमुखी halvah, नट, अनाज (दलिया, अनाज, गहुँ), दलिया, सिमी, समुद्र केल, मुला, खुबानी रूपमा आफ्नो मेनु खाद्य पदार्थ मा समावेश गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ जो मा उत्पादनहरु त्यागेर गर्नुपर्छ छन्। यसलाई जहाँ ठूलो संख्या समावेश ती मुख्य रूप सम्बन्धित ओक्सालिकएसिड। निस्सन्देह, यी उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सानो परिमाणमा। तपाईं आफ्नो दूध, अघुलनशील परिसर मा एसिड इच्छा पिउन भने, र अन्तस्करणले मार्फत छैन ल्याउन र intestines मार्फत। यी उत्पादनहरू स्ट्रबेरी, टमाटर, स्ट्रबेरी, बैगुन, नेभारा, सलाद, चकलेट, rhubarb, कफी, कुम्मैत समावेश गर्नुहोस्।
सही पिउने शासन
एक बच्चाको मूत्र मा Oxalate सामान्यतया आमाबाबुले उहाँलाई तरल पदार्थ प्रशस्त दिन बाध्य छन् भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। यो एकाग्रता र मूत्र को अम्लता कम गर्छ। बच्चालाई छैन उदाहरण, चिया, फल compote, रस लागि, केवल पानी पिउन, तर यदि यो राम्रो हुनेछ। यी पेय जो ओक्सालिकएसिड लागि antagonists छन् जैविक एसिड, समावेश भन्ने तथ्यलाई। यो क्रिस्टल बस लवण भंग भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ।
हामी देख्न सक्छौं रूपमा, बच्चा को मूत्र मा oxalate छैन खतरनाक छन्। आफ्नो सामग्री सामान्य आहार को माध्यम द्वारा समायोजित गर्न सकिन्छ। तर, यदि, लवण बाहेक, प्रोटीन, खकार, सेता रक्तकोषहरू वृद्धि पत्ता, उपचार थप गम्भीर आवश्यक हुनेछ।
गर्छ मस्तिष्क सानो ट्युमर नवजात शिशुहरु मा खतरनाक छ
तुल्यकारक, सञ्चालन र अन्य उपचार: ठूलो खुट्टाको औंलासम्म को hallux valgus को उपचार
Desomorphine। खतरनाक दबाइ को नतिजा
Cathedrals र चर्च सेन्ट पिटर्सवर्गलाई: सुविधा र रोचक तथ्य को सूची
बरफ महल सोची "ठूलो": प्राप्त गर्न कसरी विवरण
मज्जा कागजात हटाउन
Alexey Bakulin "Volgabas" बजार नेताहरूले गर्न हुन्छ
कसरी "विक" मा पृष्ठ अनफ्रिज गर्न? सुझाव
सर्वश्रेष्ठ रोमान्टिक हास्य
आकर्षक Shabby ठाठ भित्री
होटल "अल्गोरिदम" (कजान): विवरण, फोटो र ग्राहक समीक्षा
शीर्ष 10: सबै भन्दा राम्रो पुरुष इत्र